बलिउड र हलिउडसँग ‘कृ’को प्रतिस्पर्धा ः भुवन केसी | Jukson
बलिउड र हलिउडसँग ‘कृ’को प्रतिस्पर्धा ः भुवन केसी
पोखरा, ०२ पुस
यस वर्षको बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘कृ’ माघ २६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । ’गाजलु’पछि पर्दामा नदेखिएका कारण पनि युवा स्टार अनमोल केसी अभिनीत यो फिल्मतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसअघिका चार फिल्ममा रोमान्टिक हिरोको रुपमा प्रस्तुत भएका अनमोल यो फिल्ममा रोमान्टिकसँगै एङ्ग्री अवतारमा पनि देखिएका छन् ।
शुक्रवार साँझ सार्वजनिक भएको फिल्मको ट्रेलरले नै फिल्मप्रति दर्शकको उत्सुकता झन बढाएको छ । यो फिल्मको धेरैपटक प्रदर्शन मिति घोषणा भएको थियो तर अन्ततः माघ २६ गतेबाट भने ‘कृ’ देशैभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । अनमोल आफैं पनि अब दर्शकको प्रतिक्षाको घडि लम्ब्याउन चाहन्नन् ।
यसअघि यो मितिमा फिल्म ‘कान्छी’ प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो तर ‘कृ’ पनि यही मितिमा रिलिज हुने भएपछि निर्मात्री तथा नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो फिल्मलाई फागुन ४ मा र्पुयाइन् । खबरअनुसार, यो मितिमा भारतको सर्वा्धिक बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘पद्मावती’ पनि प्रदर्शनमा आउने चर्चा छ । शुक्रवार ‘कृ’ ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अनमोलका पिता तथा नायक भुवन केसीले आफू विदेशी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सधै तयार रहेको बताए ।
‘कान्छी’सँग लड्न तयार हुनुभयो, ‘पद्मावती’सँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भुवनले भने, ‘मैले अत्यन्त माया गरेको बहिनी श्वेता खड्काको फिल्म माघ २६ मै आउने कुरा थियो । तर, भुवन दाई, ‘कृ’ टीम र दर्शकलाई मध्येनजर गर्दै फिल्म नजुधाई ‘म आफू नै सर्छु’ भन्ने निर्णय गरेमा श्वेतालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । श्वेताको फिल्मका लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु ।’
‘हामीले पहिला नै माघ २६ गतेको डेट फाइनल गरिसकेका थियौं । हामी जानी(जानी कसैसँग जुध्न गएका चाहिँ थिएनौं । तर, श्वेता बहिनीको कारणले यो परिस्थिति पनि र्टयो । मैले यसअघि पनि भन्ने गरेको थिएँ कि हाम्रो प्रतिस्पर्धा विदेश फिल्मसँग मात्र हो, नेपाली फिल्मसँग होइन । त्यसैकारण जुनसुकै हिन्दी फिल्म आएपनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं ।’, भुवनले भने ।
सुरेन्द्र पौडेल निर्दे्शित ‘कृ’लाई सुवास गिरी र भुवन केसीले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा अनमोलसँगै अदिती बुढाथोकी, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, अनुपविक्रम शाही लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
‘कृ’ ट्रेलरको किर्तिमानी रेकर्ड
‘सेतो सूर्य’ अस्कर अवार्डबाट बाहिरियो
भोलि (भदौ १) देखि पोखरामा ईक्यान शैक्षिक मेला - मह जोडी ले गर्ने उद्घाटन
पोखरीको पानी नमिसाइ स्थानीयवासीको खाना पाक्दैन
के रेखासँग फिल्म खेल्दा आर्यनसँग निर्देशक राउत रिसाएका हुन् त ?
तराई क्षेत्रका थारू समुदायले 'गुरही’ पर्व' मनाउँदै
भारतको प्रतिवाद गर्छौ, झुक्ने छैनौ : प्रचण्ड